IHarvard idala eyona khompyuter inamandla kakhulu kwiplanethi | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi amaziko ophando adumileyo kwiplanethi athatha indawo kwimixholo eyahlukeneyo nakwizihloko, nangona kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo babengenamdla kuyo, ngoku kubonakala ngathi banamandla amaninzi. Ngeli xesha ndifuna sithethe ngekhompyuter ye-quantum, isihloko esele sikhona sizamile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye iya kuba yeyangoku kwakhona emva kokudalwa, yi IYunivesithi yaseHarvard, namhlanje ethathwa njengeyona khompyuter inamandla kakhulu emhlabeni.
Okwangoku, kubonakala ngathi amaziko amaninzi asebenzela ukuqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida kwimicimbi yekhompyuter ye-quantum, ikhondo lomsebenzi apho iYunivesithi yaseHarvard ingene ngomnyango omkhulu enkosi ngomsebenzi owenziwe ngomnye wabaphandi beenkwenkwezi, UMikhail lukin, ugqirha wamachiza oqeqeshiwe kwiZiko laseMoscow leFiziksi kunye neTekhnoloji kunye nomseki-mbumba weziko laseRussia leQuantum Physics.
1 IYunivesithi yaseHarvard isebenzisa ikhompyuter ye-quantum ene-51 qbits
2 Enkosi ngomsebenzi kaMikhail Lukin sikufutshane kule khompyuter ye-quantum esiyifunayo sonke
IYunivesithi yaseHarvard isebenzisa ikhompyuter ye-quantum ene-51 qbits
Iziphumo zomsebenzi owenziwe liqela lophando olwalathiswa kwaye laququzelelwa nguLukin lukhokelele ekudalweni kwe- ikhompyuter ye-quantum enokucwangciswa engekho ngaphantsi kwe-51 qbits, Esandula ukuhlelwa njengezona zinamandla kwiplanethi ngenxa yokuba, namhlanje, ezona zinamandla zinokungaphezulu kweshumi elinamibini leekiti.
Nangona amandla ale yunithi enomdla nje, into de kwinyanga ezidlulileyo bekunzima ukucinga ngokufikelela kwinto enje, inyani kukuba, okwangoku, ixabiso lokwenyani lale nkqubo alikho phezulu kakhulu kuba amandla okugcina zilinganiselwe kakhulu. Ukukuqonda ngcono oku ndingathanda ukubhekisa kumazwi kaJohn Martines kwiNkomfa yaMazwe ngaMazwe ye-IV kwiTekhnoloji yeQuantum eyayibanjelwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo eMoscow apho ingcali yaphawula ukuba Kuthatha amakhulu okanye amawaka e-qbits ukufumana ii-algorithms zangoku ukuze zisebenze.
Enkosi ngomsebenzi opapashwe yiYunivesithi yaseHarvard, kubonakala ngathi inyathelo elinye sisondele ekubeni sikwazi ukuyila nokusebenza kunye naloo khomputha ye-quantum apho amaziko amaninzi asebenza kwiiprojekthi ezixhaswa ngamaziko amakhulu abucala nawoluntu utyale izigidi ezininzi zeedola kuphuhliso lwale teknoloji.
Enkosi ngomsebenzi we UMikhail Lukin sisondele kancinci kule khompyuter ye-quantum esiyifunayo sonke
Njengoko bekulindelekile, nangona singazi ngayo, ezi nkampani zabucala zifuna ukukhupha inzuzo kolu hlobo lotyalo-mali, nangona ixesha elide kakhulu. Ngokwabaphandi abaninzi kunye neengcali kweli candelo, Obu yiteknoloji elandelayo ekwaziyo ukuguqula umhlaba ngendlela ethe kratya ngakumbi kunokuba sinokucinga.
Ukuqonda ngcono ukuba le teknoloji intsha ingasinika ntoni, sikuxelele ngokungafaniyo nekhompyuter yangoku, apho iibits zinokuba namazwe amabini, ii-qbits zinokuthetha Amazwe amaninzi ngaxeshanye. Oku kunokuba nzima ukuyiqonda, kuba kufuneka sibe nolwazi olubanzi lwe-physics ukuze sazi ukuba sithetha ngantoni na, nangona kunjalo, iziphumo zalo msebenzi zinokuthetha ukuba sikwazi ukwenza izibalo ngaxeshanye ngesantya esimangalisayo.
Ukuba sibeka oku ngokwembono, yitsho nje ukuba enye yezi khompyuter iya kuba nakho yaphule nayiphi na inkqubo yokubethela esiyisebenzisayo namhlanjeNjengoko inzima njengokuba inokubonakala ngathi, kwimizuzwana embalwa, into eyenza icace gca ukuba loluphi uhlobo lweenkqubo zesakhono ezinje ezinokuzisa.
Nangona kunjalo, njengoko kulindelwe, usemninzi umsebenzi phambili, kokubini kufundisiso lobuchwephesha nakuphuhliso lwayo. Njengeenkcukacha, xelela ukuba ukwazi ukuyila ikhompyuter ye-quantum ene-51 qbits kuye kwayimfuneko ukusebenza ngenkqubo esekwe kwii-atom ezibandayo 'babamba'emoyeni ndibulela isenzo sesizukulwana esitsha'ii-tweezers ezibonakalayo'zenziwe ngothotho lweentsika ze-laser ezilungiselelwe ngendlela ekhethekileyo ukuze ii-athomu zikwazi ukupholisa umbulelo kumandla amandla ezikuwo'betha'.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IHarvard idala eyona khompyuter inamandla kakhulu emhlabeni
Into ebangela umdla kukuba iyamangalisa indlela itekhnoloji eqhubele phambili ngayo kwiminyaka yakutshanje. Ndiyathanda ukuba ihamba kakuhle.